ကျောက်စိမ်းကို polishing နည်းလမ်းကဘာလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ကျောက်စိမ်းကို polishing နည်းလမ်းကဘာလဲ။
ကျောက်စိမ်းကို polishing နည်းလမ်းကဘာလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-07-31 မူလ:ဆိုက်ကို
အမြောက်အများလူတွေကအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်ကျောက်စိမ်း။ ဒါပေမဲ့အပေြာင်းဂျုံးဒါကသဘာဝကတည်းကထွက်လာပြီဖြစ်ပြီ, အစဉ်မပြတ်အချို့သောဖုန်အချို့ကိုယူဆောင်လာကြလိမ့်မည်သည့်အရာ၏အသွင်အပြင်အပေါ်ကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကျောက်စိမ်း.ဒါကြောင့်ပွတ်ဖို့လိုတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းအချို့လူတို့သည် polishing ၏နည်းလမ်းနှင့်သိပ်မရင်းနှီးကြပါကျောက်စိမ်း.ဒီဆောင်းပါးမှာကျောက်စိမ်းရဲ့ polishing နည်းလမ်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်ခုနည်းလမ်းများရှိပါတယ်ကျောက်စိမ်း polishing သည်။ ကျောက်စိမ်းလက်ကောက်, ကျောက်စိမ်း ckarles, ကြက်သားနှလုံးများ,စသည်တို့လက် polishing များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဒါပေမဲ့Guanyin နှင့် MaitReya သည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပန်းပွင့်အပိုင်းပိုင်း,Down- ထိတ်လန့်စွမ်းအားစက်ယန္တရားpolishing ကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ polishing ဖြည့်စွက်ရန် 3-5 ရက်ခန့်ကြာသည်တုန်ခါခြင်းပါဝါ tool ကို,နှင့်ကျောက်စိမ်းအမြောက်အများsတစ်ကြိမ်မှာပွတ်နိုင်ပါတယ်။
1. လက် polishing:
Usually ကအသုံးပြုသည်600 #-1200 # polishing စက္ကူ polishingly ထိုအရာအသုံးပြုsaအများအပြားရှိတတ်သောပါဝါ tool ကိုကျောက်စိမ်းကိုပြုပြင်ရန်စိန်နည်းနည်းတပ်ဆင်ရန်ကဲ့သို့အသေးစားပါဝါကြိတ်စက်,စသည်တို့,ဟုတ်ပါတယ်, လက်ကိုင်ကြိတ်ကြိတ်ဘောပင်ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တစ်စီးထို့နောက် ND သည်၎င်းကိုဂရုတစိုက်ပြုပြင်ရန်စိန်ဖိုင်ကိုသုံးပါ။
နောက်တစ်ခု,သင်လုပ်နိုင်သည်uကြီးမားသော area ရိယာကြိတ်များအတွက်စက္ကူ (ကြမ်းသဲနှင့်သဲ) ကိုပတ်ပတ်လည် se ။ တစ်စီးကြိမ်မြောက်ထိုအခါသင်သင့်ပါတယ်uကြီးမားသော area ရိယာကို polishing polishing polishing paste ကိုလျှောက်ထားရန်ပတ်ပတ်လည်အထည်ဘီးကိုကြည့်ပါou ဦးအသေးစိတ် polishing အတွက် polishing polishing polishing polishing polishing ကိုလျှောက်ထားရန်ကြိတ်ထိုးကြိတ်ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပါ။ ဒါ့အပြင်တစ် ဦး နှင့်အတူတိုက်ရိုက်ပွတ်နိုင်ပါတယ်ရော်ဘာကြိတ်ခေါင်း။နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းကိုစက္ကူ 1200 ဖြင့်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးစိန်အမှုန့်များဖြင့်ပွတ်တိုက်နိုင်သည်။
2. စက်ကို polishing:
ပထမ ဦး စွာ,polishing စက်ဝယ်ပါသို့မဟုတ်ပါဝါ Rotary Toolသို့မဟုတ်ပါဝါကြိတ်ကိရိယာကိရိယာpolishing bits နှင့်အတူ,အရာလက်ဝတ်ရတနာကျောက်စိမ်းစည် polishing စက်။ တစ်စီးကြိမ်မြောက်သင်လုပ်နိုင်သည်buy အချို့ emery 320 # -8000 # ။ ထို့နောက်တြိဂံပုတီးကိုအရောင်တင်ပါ,။ နောက်ကျသောpolishing စက်အတွက် polishing အမှုန့်ကြိတ်ဆုံနောက်ဆုံးတွင် အဘို့အချိန်ကာလ, ဖြစ်နိုင်ပါသည်မှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်။
3. မြ0ါယပုံပြင်:
ပထမ ဦး စွာ, သင်သင့်ပါတယ်အင်္ကျီ မျက်နှာပြင်ပေါ် paste polishing အမှုန့်တစ်လွှာ.Tဦးseနှစ်ထောင်ကွက်ကြေးဘီးမျက်နှာပြင်ကြိတ်ဆုံနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းနှစ်ခုကိုပြန်လုပ်ပါရန်။Tကြက်သင်လျှောက်ထားနိုင်သည်ကျောက်စိမ်း၏မျက်နှာပြင်မှစိန်အမှုန့်,နှင့်ပိုလန်နှင့်ထုအရောင်များကိုတောင့်တင်းသောဖြီးကိုသုံးပါ။
Polishing သည်စေ့စပ်အလုပ်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်,အဘို့ထိုကဲ့သို့သော hetian ကျောက်စိမ်းကဲ့သို့အချို့သောခက်ခဲကျောက်စိမ်းကအသုံးပြုsကွဲပြားခြားနားသော oilstone အမျိုးအစားများ။ yo p ကို pတစ်ဖက်တစ်လျှောက်အနည်းငယ်သာ Olish.Aမင်းနိုင်w ကိုအသုံးပြုပြီးအရောင်တင်ပါကြမ်းကနေကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ၏ hetstsကြိတ်သောဒဏ်ငွေရန်ကြိတ်သောအကြိမ်ပေါင်းများစွာနှင့်မျက်နှာပြင်ကြစို့ညီမျှစွာ။
ဘုံပါဝါ tool ကို တုန်ခါမှုစွမ်းအင်ကိရိယာတန်ဆာပလာ Down- Shock Power Machine အသေးစားပါဝါကြိတ်စက် သေးငယ်တဲ့ rocary tool ကို လက်ကိုင်ကြိတ်ဘောပင် ရော်ဘာကြိတ်နှာခေါင်း ပါဝါ Rotary Tool ပါဝါကြိတ်ကိရိယာကိရိယာ နှစ်ထောင်ကွက်ကြေးဘီး